Arzantina: 20 taonan’ny sarimihetsika sy sarimiaina “El Mate” maimaim-poana any an-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2018 14:20 GMT
Tamin'ny volana oktobra lasa teo, nahazo ny loka El Drako ny Escuela de Cine el Mate nandritra ny Fetiben'ny Sarimihetsika sy Lahatsary Amerikana Latina Buenos Aires, noho ny horonantsary fanadihadiana sy ny tetikasan'izy ireo “With our fingers, an online Blog (amin'ny rantsantananay, bilaogy antserasera)”, tetikasa ahitana ankizy maherin'ny 2000 avy amin'ny sekolim-panjakana samihafa ao amin'ny faritra izay namorona marika amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro, mampiseho ny rantsantanan'izy ireo sy ny tanan'izy ireo amin'ny endrika samihafa.
“Under the Same Moon” dia sarimiaina fohy ahitana fifanakalozan-kevitra malalaka. Milaza ny tantaran'ny vondrona mpinamana izay napetraka tamin'ny lavaka samihafa, ary ny filàn'izy ireo ho afaka sy ny fonjan'izy ireo tsirairay avy, fampahatsiahivana mampitolagaga ny Ady Maloto niainana tao Arzantina. Raha mijery hatramin'ny farany ianao dia hahita sary misy ny dingana nampiasain’ ireo ankizy maka sary sy manatontosa ny sarimihetsika. Tsindrio ny sary raha te-hijery ny lahatsary ianao.
Nampiditra lahatsary maherin'ny 114 tao amin'ny Youtube ny Taller de Cine El Mate, izay vokatra sarimiaina sy vokatra azo avy amin'ny hetsika tena izy, izay noforonina, novokarina, nalaina sy navoakan'ireo mpianatra. Nanao fanadihadiana ihany koa izy ireo tamin'ny lasa, toy ny filma nivoaka tamin'ny taona 1988 momba ny sekoly saingy ny ankamaroan'ny ezak'izy ireo dia natao mba hamporisihana ny fahaiza-mamorona sy ny famoronan-javatra eo amin'ireo mpandray anjara, fahaizana izay azon'izy ireo ampiasaina amin'ny sehatra hafa eo amin'ny fiainan'izy ireo. Samy hafa, fa tsy tantara fotsiny ny horonatsarin'izy ireo, fa fahaizana ampiasaina hanatanterahana izany koa. Jereo ny sarimiaina nataon'izy ireo momba ny extra terrestre, ny sarimiaina fohy zon'ny ankizy manohitra ny fanararaotana, ary ny sarimiaina natao sary an-tanana momba ny fomban-drazana eo an-toerana miaraka amin'ny namana mpiara-misotro.